Dhugaan hin qallatti malee hin cittuu! Warri ABOtti shiraa turan wal saaxiluu jalqaban. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsDhugaan hin qallatti malee hin cittuu! Warri ABOtti shiraa turan wal saaxiluu jalqaban.
Dhugaan hin qallatti malee hin cittuu! Warri ABOtti shiraa turan wal saaxiluu jalqaban.
Abbaa Orma, (PhD), Bitootessa 12, 2019
Xiyyeeffannoo guddaa: Meeshaan waraanaa guddaa nikulaar bombiin (nuclear bomb) gaafa Bitootessa 9-10, 2019, to’annoo jala oolee jira. Meeshaan kun yeroo amma magaalaa Finfinnee mooraa Raayyaa ittisa biyyaa keessaa naannoo xoor haahiloochi kontinaara guddaa keessatti argama. Wanti gaaffi namatti ta’u, (1) Meeshaa kana kan eegaa jiru Pooliisii fedeeraalaati mooraa raayyaa ittisa biyyaa keessatti isa iyyuu maaliifi? (2) Meeshaan kun eessaa hatamee? (3) Eenyuunis hatamee? (4) Eessa dhaquuf ture? (5) Meeshaa kana qaamni wahii ajaja mana murtii malee nuti qorattota fida fuuneeti deemna jennaan waraqa ajaja fida jedhamnaan nasuun achumatti dhisani akka deemani odeessi jira jarreen sun eenyuturan? Kanaaf dhimmi meeshaa waraanaa guddaa sanyii dhala namaa balleessu kun eessa akka dhufee fi eessaa akka dhaquuf ture qaamni dhimmi kun ilaallatu akka hordoffii itti godhu share waliif godha. Hubadhaa jaarraa tokkoo fi walakkaa dhala oromoo miti lafti oromoo iyyuu akka maseenu ykn akka midhaan hin magarsineef shira meeqaaf meeqaatu godhamaa ture.dubartoota oromoo maseensuu fi dhukkuba addaa addaa qabsiisa akka turan seenaan haa dubbatu. Waan hundaafuu meeshaa dhala namaaf balaa guddaa qabu kun haa hordofamuun dhaamsakooti!
OPDOn woggoota 28 darbani Oromoorratti duulaa, ajesisaa, samssisaa, qabso Oromo ABOn gaggeeffamu takaaluu halkaniif guyyaa tattaaffataa bahun isii Oromoo kamirraayyuu dhokataa miti. Amma gaafa qabsoon Oromoo diina caccabsee as bahutti, baabura qabsoo feermaataa issaa dhumarratti Araat Kiiloo jalatti eegdee yaabatee warra qabsaa’aa dhugaa qarqaratti dhiibdee qabsoo Oromoo Nafxenyaa Amaaraatti dabarsuuf tattaaffataa jirti.
Yaa Oromoo fira fi diina kee addaan baafadhuu qabsoo kee itti fufi. Warri WBO diiguu/balleessuu tattaaffatu fira qabsoo keetii miti diina qabsoo keetiiti male! Oromoo ta’eef hundi fira miti, alagaa ta’eef hundii diina miti. Warra afaan dammaan haqatee si gowomsaa jiruu addaan baasi .
Akka ummanni Oromoo fi adunyaan guutuutti hubatutti, seenaan OPDO seenaa fokkisaa, seenaa gantuu, seenaa diinaati! OPDOn Dr. Abiy fi Lammaa seenaa sanarraa baqachuuf of ha moggeessanu malee hojin jaraa hojii OPDOrraa hamaa dha. OPDOn mirga Oromoo falmuuf hin ijaaramne. Sabni Oromoo dantaa mirga isaatiif jedhee OPDO hin utubneen. Tigreen sodaa ABO waan qabduuf ABO ittiin mormuu, Oromoo ittiin gowwomsitee qabeenyaa Oromoo ittiin saamuuf booji’amtoota waraana Dargii walitti qabdee gammoojjii Tigraay keessatti ijaarrattee Finfinnee Oromiyaa futee seente. Woggoota 28 darban keessa OPDOn kaayyoo ijaaramteef kana fiixaan baasuuf halkan fi guyyaa hojjetaa batee. Hata’u/ha’ita’u malee ABOn hin banne, hin badus. ABOn qabsoo Oromoo sagantaa ol aanaatti cessisee OPDOllee Tigree jalaa bilisa bassee.
OPDOn diina diinqa Oromoo argisiisuun, Oromoota qaroo ta’an diinatti saaxiluun lubbuu Oromoota kuma dhibbaan lakkaahamanu adduunyaa kanarraa dhabamsiifteetti. Ilmaan Oromoo daa’ima, jaarsa, shamarran, dargaggoota, barattoota, qoteebultoota, daldaltooti otuu hin hafin ajjeefamaniiru, maatiin jaraa diigameera, biyya ambaatti baqachuu galaanatti dhabamaniiru. Ilmaan Oromoo kumaatamaan mana hidhaatti dararamanii gariin ijaan jaamanii, kaan harka fi miila ciramanii, kaan sammuu tuqamanii, maatii fi Oromoo gadda hamaa kan sammuu nama tuqutti naqaniiru. Balballi Oromoo kan OPDOn hin gaddin jira jechuun nama rakkisa. Oromoota harka caalaa kan mana hidhaatti guuree OPDOdha malee TPLF miti. Oromoon “OPDOn hidhuu male hiikuu hin dandeessu” jedhuu. Qoteebulaa Oromoo kumaatamaan lakkaahamanu maqaa invastimantiitiin buqqiftee saba biraa qubachiifteetti kaanimmoo ofii gurgurattee ittiin soromteetti.
Waggoota darban 28 keessatti ilmaan Oromoo hedduun mana barumsaatii gaafa ari’aman afuura raafuu hin baafanne. Diina jala gortee ilmaan Oromo komataa baate. Gaafa Mallasaan magaalaa Oromoo kan akka Harar, Dirree Dawaa, jijjigaa, Finfinnee saba kaanii raabsu, waliin harka rukutaa turtte. Lafa Oromoo rukunii hundaan ciramee saba Somaalee, Affaar, baniishaangul, fi kkf dabarfamu cinaa dhaabbattee harka rukutaa turte. Naannoo Finfinneetti magaalota akka Aqaaqii, Dukam, Sabbataa, fi kkf. maqaa adda addaa itti moggaasuun oromiyaa jalaa bahuu galma kumeetti walgeessee sirbaa turte. Gaafa ilmaan Oromoo Carcaritti, calanqootti, irreecharratti, Finfinneetti dhiigni dhangala’u, OPDOn abukaatoo Tigree ta’uun Oromoo balaaleffataa turte. hardhammoo lafa qoteebulaarratti Amaara qobachiisuuf tattaaffataa jiru. Lafa qoteebulaa Oromoo dabarsanii kennuuf koomitee dhaabbatteetti. Maaliif lafa Oromoo hirachuuf koomiteen barbaachise? Maaliif lafti Oromoo mormii dhihaata?
Kan darbe hadhifnuu mee hardha OPDOn maalitti jirti?
Hardhas OPDn kaayyoo ganamaa TPLF ittiin ijaaree, ABO balleessuurratti xiyyeeffattee diina wajjin hojjetaa jirti. Garuu milkanahuu fi dhiisuusii kan murteessu qabsoo ummattaa Oromooti! Qabsoon ABO Oromoon addaan bahee gaggeesse hinjiru. Qabsoon ABO qabsoo ummata Oromooti. Murteesan qabsoo qeerroo fi qarree Oromootii. ABO balaaleffataa qeerroo mararfachuun of gowoomsuu dha!
Hardha gaafa qabsoon Oromoo ABOn waggaa dheeraa gaggeeffamaa ture, Oromoon jaarraa tokkoo oli itti wareegamee asiin gahe, qeerroo fi qarreen Oromoo, WBOn, saba Oromoo balaa hirmaachisuun TPLFn angoorraa darbee Maqaleetti galchu, OPDOn woggaa 28 Oromoorratti duulaa baate, ilmaan Oromoo ficcisiisaa baate baabura qabsoo fermaataa dhumarratti Araat Kiiloo jalatti eegdee yaabbattee warra qabsaa’aa dhugaa qabsoo fidan asiin gahan qarqaratti dhiibdee qabsoo Oromoo Nafxenyaa Amaaraatti dabarsuuf tattaafataa jirti.
Minilikiin faarfatti, H/Sillaasee faarfatti, siidaa H/Silaassee han’ura Oromiyaatti dhaabdi, lafa Oromoo Amaaraa dabarsitee hirti, aadaa fi afaan alagaa faarfatti. Sabboonumaa Oromoo balaaleffatti, Oromummaa baleessuurratti xiyeeffatti, hundarrammoo saba Oromoo gowwoomsuu yaaddi, hugna diinaa fayyadamtee Oromoo irratti lola gageessaa jirti.
Waan Oromoon dagachuu hin qabne OPDOn jalqabumaa kaasee kan ijaaramtee ABO dura dhaabbachuuf malee faayidaa saba Oromootiif miti. Otuu ABOn hin jirree OPDOn hinjiraattu. Har’as kaayyoon OPDO kaayyoo ganamaa ittiin ijaaramtee sana iddoon gahuu dha . ABO balleessuun faayidaa enyuuf akka ta’e waaqatu beeka.
Addi Bilisummaa Oromoo OPDO bilisa baasee mootummaa EPRDF Dr. Abiyiin hogganamu waliin walii galee biyya galee qabee OPDOn miseensotasii biyyaa ambaa galfattee waliin taatee shira ABOti shiruttii galuunsii hedduu irraa dubbatameera. Mee ji’oottan darban saddeettan keessatti maaltu ta’e isa jedhuu gababaatti waliin ha hubannu:
Sochii ABOn nagaadhaan ummata Oromoo wajjin akka hin mari’anne danqaa uumuu
Waajjira ABO ummanni Oromoo baneef cabsanii saamsisuun sochii ABO takaaluu
Hogganoota ABO mana hidhaatti guuraa karaa biraatiin Mummichi ministeeraa sababa siyaasaatiin “namni tokkoollee mana hidhaa keessa hinjiru” jedhaa hidhamtoota Oromoo beekumsallee dhorkuu
Maqaa ABO kijibaan xureessuu, ummata Oromoo saba fi sablammoota jaarraa dheeraaf waliin jiraateen walitti buusuu
Oromoota gandaa fi amantiin qoodu. Fakeenya Muumichii ministeraa Dr Abiy Ahmad adunyaa fuulduratti bahee kijibaan Jimmaa, Arsii, fi Baalee Wallagaatti duula jechuun saba Oromoo addaan hiruu yaaluu.
RIB boobbaasanii baankii saamsisuun WBO tu saamee jedhanii maqaa WBO, ilmaan Oromoo mirga isaatii falmuu bosona jiru xureessuu.
RIB WBOrratti duulchisuu. Ganda Oromoo xayyaaraa lolaatiin gubuu.
Dantaa siyaasaatiin Abbaa Gadoota addaan hiranii WBO mooraatti naquun akka bara 1991/92 ilmaan Oromoo ficisiisuu tattaafachuu
Ilmaan Oromoo (WBO) karaa nagaatiin qabsaa’uuf biyyatti galaniirratti mooraa Ardaaytaa keessatti dararamaa hamma geessisuun rakkissanii daandiirratti facaasan
Qeerroo/Qarree Oromoo lubbuu ofii wareegamanii isaanis aangoon gahan addaan hiruu fi kaan mana hidhaatti naquu
Oromoota of dagatanii qabsoo Oromoo sirriitti hin hubanne gowoomsuun afaan faajjessuun mooraa qabsoo Oromoo addaan facaasuu yaaluu
Partiilee Oromoo addaan baasuuf waldhabiinsa gidduu jaraa jiruu baballisuun mooraa qabsoo Oromoo laamsheessu irratti hojjachuu
Aktivistoota/miidiyaa Oromoo/ Midiyaa Amaaraa fkk. ESAT diina Oromoo ta’an maallaqaan gargaaruu fi ummata Oromoo olola hamaa irratti oofsisuu.
Nafxeenyaa ijaaruu fii fi mootummaa fedeeraalaa keessatti aangoo gurguddoo irra kaa’uun waan Oromoon jaarraa tokkoo ol itti qabsaahe balleessanii sirna cunqursaa habashaatti isa deebisuuf tattaafachuu
Yeroo diinni Oromoo bitaa fi mirgaan qawwee hiratee Oromoo qehee isaarraa godaansisuu tora silaa irraa lolanu akka ummatni Oromoo diina ofiiraa hin lolle qawwee harkaa fuudhanii harka duwwaa diinaaf saaxiluu
Diina kaleessa Oromoo adamsee ajjeesaa ture maqaa RIBtiin Oromoo Wallaggaa fi Boranaatti bobbaasanii ummata Oromoo minaan isaa, loon isaa, mana isaa irratti gubuun ummata keenya lafarraa daguugsisuu
Aktivistoota maallaqaan bitanii WBO sobaan mooraa diinaatti naquun ilmaan Oromoo ficcisiissuuf karoorfachuu
Nafxenyaa lafa qotee bulaa Oromorraa irratti daangaa Oromiyaa kiiloomeetra 25 ol seenanii qubsisuuf tattaafachuu
Ummata Oromoo biyya malee, jiruu malee qullaatti hanbisuun deegaaf saaxiluu.
Jijjiirama dhiiga ilmaan Oromootiin argame dabarsanii nafxenyaaf kennuun haadhasii saba keenya garbummaa garbummaatti dabarsaa jiruu.
OPDOn farra fi diina qabsoo oromooti malee fira qabsoo oromooti miti! OPDOn kan TPLFin ijaaramteef sababa tokko qofaafi . innis ABO danqanii ummata Oromoo harka wayaa jalaan TPLFn to’achiisuufi. Dirqama kanaan OPDOn diina ummata Oromoo wajjin ta’uun gargaaruu fi gadgaloo taatee waggoota 28n dabraniif ummata hiraarsaa, qe’ee buqqisaa baateetti. Kanumaaf OPDOn yakka ummata Oromoo irratti raawwatamaniif gaafatamuu baqachuu fi filmaataan ABOn moohamuu sodaan carraa argame hundaan ABO filmaata keessaa baasuuf hojjetaa jirti. Sodaa ABO filanno mo’a waan qabduuf waraanni ummata Oromoo irratti banamee, lubbuun ilman Oromo badaa jiruuf fi millionaan qehee sara buqqa’a jiruuf. Oromoota dhiha Oromiyaa keessa jiraatan irratti maqaa xureessan dhiheenya kana adeemaa jiru itti yaadamee, ABO kan ganda fi naannoo tokkoo fakkeessuun yakka raawwatamaa jiru seenaan hin irraanfatu
Ummanni Oromoo Maal Gochuu Qaba?
Yaa Oromoo yoo bilisummaa dhugaa barbaaddaa taate, yoo abbaa biyyummaa mirkaneeffachuu feete, yoo haqa kee argachuu feete, yoo mirga kee deebifachuu feete, hojiin inni jalqabaa, OPDO karaa sirriitti dhiibuu dinnaan balleessuu dha. Hamma OPDOn njirtutti Oromoon mirgas, biyyas hin dhunfatu.
OPDOn ati dhiiga ilmaan keetiin Tigree jalaa bilisa baaftee sirna Amaaraa filatee filattee offis ofis garbomstee garboomsitee garbumaatti sii si debisuuf deebisuuf tattaafataa jirti. Har’a achi OPDOn gowomuu dhisii dhiisii dhaaba kee fidee asiin sii si gahee gahe Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) jalaatti jalatti hiriiri, Qeerroo fi Qarree kee cimsi, WBO kee cinaa dhabadhuu dhaabbadhu daandii bilisummaa jaarraa tokkoon oli irraa irra jirtutti fuffi fufi. Filannoon biraa hinjiru. Amma kan of gaaffachuu gaafachuu qabdu maaliif alagaanis, dinnis diinnis ABO keetti duula duulaa jira? Deebiin isaa iffaadhaa ifaa dha. Jibbaan ABOf qabanu malatoo mallattoo jibbaa sii siif qabanu fi jibbaa saboontummaa Oromooti oromootii qabanu. Sabboontummaa Oromoorratti duuluun duraa malattoo sabboontummaa Oromoo isa ta’e ABO irratti duuluu qabu. Adda Bilisumma Oromoo irratti duuluun dura WBO baleessuu qabu. Qoteebulaa Oromoo lafaraa haxahanii balleessuu, dura WBO balleessuu qabu. Wanti amma mootummaan EPRDF Dr. Abiyiin durfamu itti jiru kanuma. WBO balleessani, ABO diiganii, Oromummaa akka yakkaatti labsanii si balleessuuf deemu! Har’a WBO irratti waraana bobbaasudhaan meeshaa waraanaa gurguddaa Oromiyaa keessa oli fi gadi harkisaa jiru. WBO cinaa dhaabbattee waraana kana fashaleessuun dirqama Oromoo hundaati.
Gaaffiin Oromoon hundi akkasumas ummati ilaalcha qajeelaa qabu of gaafachuu qabu Addi Bilisummaa Oromoo (ABO) maaliif aangaawota Amaaraa, aangaawota Tigree, fi aangaawota Oromoota yartuu ta’aniin yakkamaa taa’aa kan jedhu. Keessattuu OPDO dhaan kan amma yakkamaa jiru gaaffii guddaa dha.
Dhumarratti, qabsoon ummata Oromoo waanjoo gabrummaa of irraa buusuuf jaarraa tokkoo ol itti jiru kun gargaarsa ormaa takkaa argatee hin beeku. Jalqabaa hanga ammaatti ummata Oromoo hirkoo taasifatee deemaa jira. Hanga ummani Oromoo aangoo humna siyaasaa dhugaa goonfatutti qabsoon kun itti fufa. Akka gartuun kanaan dura yeroo OPDOn TPLFn tiksamtuu harka rukutaa turan ammammoo mootummaan jiru mootummaa Oromooti nuun jechuu barbaadu. Oromoon bilisoomeera nuun jedhu. Warri kun warra bilisumman maal akka fakkaatu hin hubanne fi daallummaa siyaasaa isaan qaban waan agarsiisu. Ragaa tarreessuun utuu danda’amuu ammaaf, bira hadarbinu. Ragaanuu of himaa jira. Ummaanni bilisomoo Oromo hinfakatuu. Dhugaa dubachuu fi Dr. Abiy jalatti kan bilisoome nafxanyaa Amaarati. Oromoon bilisoomufi qabsooti jiraa!
Rabbii jedhati Ilaala ERGAA #WBO XOOLLAY JIRURRAA